यहाँसम्म पुग्न परिवारको साथ नै हो - Tesro Ankha
यहाँसम्म पुग्न परिवारको साथ नै हो
कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रत्येक बुधबार साँझ ७ बजे प्रसारण हुने दर्शक श्रोताहरुले निकै रुचाएको सिरियल हो । हर्के हवल्दार एक रुप अनेक पात्रको भूमिका निभाउने निकै चर्चा कमाएमा कमेडियन हास्य कलाकार हर्के हवल्दारको निर्देशक विष्णु सापकोटासँग तेस्रो आँखाका लागि नवीन चाम्लिङ राईले गरेको भलाकुसारी ।
कलाकारीतामा यहाँसम्म आइपुग्नु भो यो क्षेत्रमा सुरुवातिमा कसरी लाग्नु भएको थियो ?
म एउटा साधारण किसानको छोरा हुँ कलाकार बन्ने मेरो सानै देखिको चाहाना हो । स्कुल पढ्दा देखिनै खाट खोजेर स्टेज बनाएर त्रिपाल तन्नाहरु घरबाट ल्याएर हामी अभिनय गर्ने गथ्यौँ यसरी क्रमश रुपमा अगाडी बर्दै जाँदा यहाँ सम्म आई पुगेको छु ।
सफल बन्न कसैको साथ हौसला प्रेरणाको आवश्यक अवश्य पर्छ तपाइको जीवनमा के छ ?
कलाकारितामा म यहाँ सम्म आउनुमा मेरो परिवारबाटै हौसला साथ पाएको हुँ घर परिवारले मलाई साथ नदिएको भए सायद मेरो कलाकारिताको सपना सपना नै रहन्थ्यो मेरो आफ्नै दाई गणेश सापकोटा प्रोडक्सन मेनेजर भएकोले गर्दा पनि धेरै सजिलो भयो । चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश पनि मैले दाईकै कारणले पाएको हुँ मेरो कलाकारिताको सम्पूर्ण प्रेरणा आफ्नो परिवार नै हो ।
पर्दामा आउन कसरी अवसर मिल्यो ?
मैले पहिलो अवसर सिन्दुर पोते चलचित्रबाट पाएको हुँ त्यहीबाट म पर्दामा आउन सफल भए ।
सुरुवात देखि अहिलेसम्म कतिवटा सेलुलाईट चलचित्रहरु खेल्नु भएको छ ?
सुरुवात देखि अहिलेसम्म १०० भन्दा माथी सेलुलाईट चलचित्रमा खेलेको छु ।
दर्शकहरुले निकै रुचाएको हर्के हल्दारमा तपाई कुन भागबाट देखिनु भएको हो ?
हर्के हल्दारमा म सुरु देखिनै हो ७८ भाग सम्म मैले स्कृप्ट पनि लेखेको छु । दर्शक श्रोताहरुमा अझै थाहा नभएको कुरा पछिल्लो समय मैले थाहा पाए हर्के हल्दारमा लाहुरे बा र हर्के हवल्दार खेल्ने पात्र म नै हुँ अहिले सम्म कतिले फरक फरक सोच्नु भएको पाएको छु तर त्यो दुई पात्र म नै हुँ ।
हर्के हल्दारमा कति भागदेखि निर्दैशकको भूमिका निभाउनु भयो ?
हर्के हल्दारमा डाईरेक्टरलाई सुरुदेखिनै मैले सहयोग गर्दै आएको हो तर ७५ भाग देखि भने मैले निर्दैशकको भूमिका निभाउँदै आएको छु । ।
अहिलेसम्म कार्यक्रमको सिलसिलामा कति पटक विदेश पुग्नु भो ?
कार्यक्रमको सिलसिलामा म अहिले सम्म १३ पटकसम्म नेपाल बाहिर गएको छु ।
हर्के हवल्दार बाहेक अरु केही बनाउने सोच बनाउनु भएको छ की छैन ?
अहिले त कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रत्येक बुघबार साझ ७ बजे प्रसार हुने हर्के हवल्दार मै व्यस्त छु । तर भविश्यमा एउटा से सेलुलाईट चलचित्र निमार्ण गर्ने उदेश्य बनाएको छ ।
नयाँ पुस्ताहरु पनि कलाकारितामा निकै लागेका छन उनीहरुलाई के सल्लाह दिनु हुन्छ ?
कलाकार बन्ने रहर सबैमा हुन्छ सक्क्षम भएर प्रवेश गर्नुहोला मुख बङ्यार मात्र कमेडी हुदैन रियालिटी अभिनय गर्न सिक्नु होला कलाकारिताका तपाईहरुको ठाँउ छ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहानु हुन्छ ?
पछिल्लो समय चलचित्रमा ग्रुपिजम हुनु थालेको छ । सबैले जोडी पार्टनरसँग काम गर्छन तर म एक्लै अहिले सम्म हर्के हवल्दार चलाउदै यहाँसम्म ल्याउन सफल भएकोे छु । माया गर्नु भएको छ तपाईहरुको मायाको सधै मलाई जरुरत हुन्छ । मैलेगरेको काममा तपाई दर्शक श्रोताहरुको सल्लाह सुझावको आशा गर्दछु साथै नेपाली चलचित्रलाई सधै माया गरिदिनु होला जय देश जय सिनेमा ।
२०७८ फाल्गुन १२ १५:१७
२० हजारको सेयर